Rabshado Ka Billaawday Magaalada Burco iyo Taageerayaasha Xisbiga Waddani oo Xarumo Qabsaday.
Thursday November 16, 2017 - 20:54:06 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya gobolka Togdheer ayaa sheegaya in rabshado xooggan ay halkaas ku dhaxmarayaan ciidamada maamulka isku magacaabay 'Somaliland' iyo taageerayaasha kooxaha mucaaradka ah.
Maanta gelinkii dambe ayaa rasaas laga maqlay xaafado katirsan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer halkaas oo rabshado xooggan lagasoo sheegayo, wararka ayaa intaasi ku daraya in dhalinyaro taageersan Xisbiga Waddani ay qabsadeen xarumo dowladeed oo magaalada kuyaal.
Video lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinayay dad caraysan oo magaalada Burco dhax yaacaya waxayna taageerayaasha mucaaradku ka cabanayaan in lagu shubtay doorashooyinkii madaxtinimo ee 13-kii bishaan ka dhacay dhammaan deegaannada gobollada Waqooyi galbeed.
Sidoo kale magaalada Hargeysa ayaa lagasoo sheegayaa xiisada colaadeed oo aad udaran, maleeshiyo beeleedyo hubeysan oo kasoo horjeedo Xisbiga Kulmiye ayaa lagasoo sheegayaa dhowr gobol oo katirsan deegaanka loo yaqaan 'Somalland'.
Cabdi Raxmaan Cirro oo ah musharraxa utartamaya Xisbiga Waddani ayaa taageerayaashiisa ugu baqay in ay joojiyaan rabshadaha ayna ka war sugaan natiijada kasoo bixi doonta guddiga doorashooyinka.
Maanta ayuu Afhayeenka Xisbiga Waddani ku dhawaaqay in uu joojiyay wada shaqeyntii kala dhaxaysay guddiga doorashooyinka isagoo ku eedeeyay in ay iska dhega tireen cabashooyin ay gudbiyeen oo ku aadanaa kushubashooyin ka dhacay goobaha doorashooyinka.